ပသီလူမျိုးကို လူမျိုးစုတစ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ ပသီလူမျိုးတွေကို တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတစ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာမှာ ကုတ်နံပါတ်သတ်မှတ်ပေးဖို့ UNC အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးကွန်ဂရက်ပါတီက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ကနေ ဒီနေ့အထိ သုံးရက်ကြာကျင်းပတဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး ကွန်ဂရက်ပါတီ ညီလာခံကနေ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက် ဖေါ်ပြထားတာပါ။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး ကွန်ဂရက်ပါတီက တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်ချိုက သူတို့တောင်းဆိုချက်ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်မှာ ကျနော်တို့ ညီလာခံလုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီညီလာခံမှာ အဆိုတွေ တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်၊ တိုင်းရင်းသားစာရင်းမှာ ပသီလူမျိုးများကို တိုင်းရင်းသားစာရင်းမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးဖို့ သန်းခေါင်စာရင်း ထုတ်ယူတဲ့အခါမှာ pre code ထည့်ပေးဖို့ အဲဒီအဆိုလည်းပါခဲ့ပါတယ်၊ တခြားအဆိုတွေလည်းပါတယ်၊ အဲဒါဘာတွေလည်းဆိုတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ထာဝရ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ဒါတွေလည်းပါပါတယ်၊ အဲဒါကို ဒီနေ့ကတော့ အများပြည်သူသိအောင် ကြေညာဖို့အတွက် ဒီပွဲကိုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်”
UNC ပါတီက ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ထွန်းကားရေးနဲ့ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေကို ကုလသမဂ ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်း၊ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီ ပြင်ဆင်ပေးဖို့ကိုလည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ပသီလူမျိုးဆိုတာ နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်နီးပါး လူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့ ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၊ အရင်က မြန်မာ - မွတ်စလင်လို့ သတ်မှတ်ခံရတာကနေ ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေး မရောယှက်ရဘူးဆိုပြီး အဲဒီအမည်ပါပျက်သွားကြောင်း နောက်ပိုင်းမှာ ဗမာဆိုပြီး ခေါ်ဝေါ်ကြောင်း ဦးခင်မောင်ချိုက ပြောပါတယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကွန်ဂရက်ပါတီ UNC ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်က တရားဝင်ပါတီ တည်ထောင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
You stay in Myanmar mean you are Myanmar. Why did the Pathi people appear after 1000 years after? Those Pathis are already mixed with natives. OIC suggested you to do , right. Please be as Bangali or Myanmese. Don't make trouble to your Host.
THE BUDDHIST ORIGIN IS FROM INDIA. BUDDHISH CAME FROM INDIA OR NEPAL. BUDDHISH SAY WHICH LANGUAGE, MYANMAR OR NOT. TAKE CARE...
Jan 28, 2014 09:09 PM
Ko Ko Soe .. . ပသီ ဆိုတာက အိန္ဒိယနိုင့်ငံက လာတာဗျ. မွတ်ဆလင် မဟုတ်ဘူး။ မွတ်ဆလင်နဲ့ မတဲ့ဘူး။ တမီးလ် စကားပြောတယ်။ ပထန်ဆိုတာကမှ မွတ်ဆလင်။ မသိတာကို အရမ်း မပြောနဲ့
ပသီ လူမျိုး ကြည့်ချင်ရင် ဒီလင့်ခ်မှာ ကြည့်ပါ
Jan 27, 2014 01:02 PM
ကျနော့် အမြင်မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ ဘယ်သူ့မှလက်မခံလို့ ပသီ ဆိုပြီပြီး ပြန်တောင်းဆိုတယ်လို့ ထင်ပါတယ်..ပသီလဲ နောက်ဆုံးတော့ မူဆလင်ပါပဲ့ လက်မခံပါဘူး...
Jan 26, 2014 10:17 PM